Factory tubbo Dredge, shirkado - Shiinaha Dredge tubbo-saareyaasha
Soodhaweynta tuubada tuubada 'ZEBUNG Rubber Dredging Hoses' waa ujeeddo loo dhisay shuruudaha gaarka ah ee macaamiisheenna. Waxaan joognaa boos aan ku dhisno cabbir tuubbo u dhexeeya 100 mm ID ilaa 2200 mm ID. Naqshadeeyayaashayadu waxay ka xulan doonaan waxyaabaha ugu habboon alaabooyin badan oo kala duwan oo aan heli karno si aan ula kulanno shuruudaha adeegga iyo dalabaadka ay codsadaan macaamiisheennu sida ku saabsan xirashada iska caabbinta, qiimeynta cadaadiska, xoogga silica, awoodda foorarsiga iyo xuduudaha kale. Guud ahaan Z ...
Tuubbada nuugista ee 'ZEBUNG Rubber Dredging Hoses' waa ujeeddo loo dhisay shuruudaha gaarka ah ee macaamiisheenna. Waxaan joognaa boos aan ku dhisno cabbir tuubbo u dhexeeya 100 mm ID ilaa 2200 mm ID. Naqshadeeyayaashayadu waxay ka xulan doonaan waxyaabaha ugu habboon alaabooyin badan oo kala duwan oo aan heli karno si aan ula kulanno shuruudaha adeegga iyo dalabaadka ay codsadaan macaamiisheennu sida ku saabsan xirashada iska caabbinta, qiimeynta cadaadiska, xoogga silica, awoodda foorarsiga iyo xuduudaha kale. Guud ahaan ZEB ...